Best China Supplier Moringa Oil mkpa mmanụ ụlọ ọrụ na-emepụta | HaiRui
China Supplier Moringa Mmanụ dị mkpa mmanụ
Karama, DRUM, Glass akpa, ngwaahia mbukota
Mọstad pungent. Iwe
Ìhè odo liguid
Medicals, Fragrances and flavors, Ngosiputa Ngwa na Chmeicals,
Ntughari Refract ::
Ike ndọda Specific @ 25 Celsius C:
1.25kg Fiber Drums with inside double plastic bags 2. GI drums nke 50kg / 180kg net. 3. Dị ka ndị ahịa chọrọ.
Foto dị na
Moringa Mkpụrụ Mmanụ bụ mmanụ dị nro na-agbasa ma na-abanye n'ime anụ ahụ n'ụzọ dị mfe. Vitamin A, B, C, E, unsaturated fatty acids and palmitoleic, oleic na linoleic acid na-enye nnukwu agwa ya na-edozi ahụ. Moringa Mkpụrụ Moringa nwere antioxidants 1,700 ma ndị ọkachamara weere ya dị ka otu n'ime "mmanụ ịchọ mma kachasị achọta". N'ihi elu ya
ịta ahụhụ nke antiseptik na mgbochi mkpali Njirimara, Moringa Mkpụrụ Mmanụ na-enyere aka ibelata ọdịdị nke ezigbo ahịrị na wrinkles ma jiri ya mee ka ọ dị ọcha ma gwọọ akpụkpọ ahụ.Moringa ụgbọelu mmanụ na-adị oke mkpa na ụlọ ọrụ ịchọ mma. A na-ewere ya dị ka ihe kachasị mma maka ịhịa aka n'ahụ na ngwa aromatherapy. Mmanụ ahụ na-achọta ngwa n'ọtụtụ ngwaahịa gụnyere ude na-egbochi ịka nká, ngwaahịa nlekọta ntutu, ncha na ịsa ahụ, ude ihu, senti na deodrant.
Moringa mkpụrụ Moringa na-enyere aka ime ka Ihu Nhu na Skin dị ọhụrụ
Dị ọcha odo mmiri mmiri
Ọgwụ ọgwụgwọ maka ntecha, ọgwụ, nri
Sì moringa pụrụ iche
Agehịa aka n'ahụ, ntecha maka nlekọta anụ, diffuser, Medicine
na mọstad mmanụ adabara nkịtị pepole, ndị ọrịa na hyperlipidemia, ọbara mgbali, ọrịa obi ọrịa, ọnwụ nke agụụ adabara oriri.
1. Nwee mmetụta nke agụụ, nwere ike iwalite agụụ
2. E nwere ọrụ detoxification siri ike. Ya mere, azụ salmọn na azụ ndị ọzọ na-ejikarị mọstad
3. Iji gbochie ire ure ezé, kansa, mkpụkọ ọbara. Nwere ụfọdụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke ụkwara ume ọkụ
Iji gbochie cholesterol dị elu, ọbara mgbali elu, ọrịa obi, belata ikikere ọbara
5. n’arụ, mọstad bụ ezigbo mmanụ ịhịa aka n’ahụ
1. 250-1000ml / karama Aluminom
2. 25-50kg / plastic drum / kaadiboodu igba
3. 180 ma ọ bụ 200kg / gbọmgbọm (Galvanized iron drum)
Nke gara aga: Wepu Macadamia aku mmanụ dị oké mkpa maka Ncha
Moringa Mmanụ Maka Akpụkpọ
Virgin Moringa Mmanụ
Nnukwu Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpọrọ Cardamom
Food ọkwa oriri Organic Coriander Mkpụrụ Mkpa ...
100% Mmiri mmiri mmiri mmiri
Manufacturing organic 100% ọcha oyi enwe mo ...
10ml 50ml 500ml 25kg mmanụ oyi na-atụ mmanụ
Ibu Loss Massage Oil lavender mkpa mmanụ ...